“Nuti Mormaa Oliin ODF, Mormaa Gadiin Immoo ABO dha” Ka kan dubbatan Obboo Leencoo Baatii 20131027 – Welcome to bilisummaa
“Nuti Mormaa Oliin ODF, Mormaa Gadiin Immoo ABO dha” Ka kan dubbatan Obboo Leencoo Baatii 20131027
bilisummaa October 27, 2013	8 Comments
Marii bal’aa sarara palatalk mana ONCAD bara 20131027 miseensa garee ODF/ADO fii KHG kan tahee Obboo Leencoo Baatii waliin taasise guutuu isaa…daawwadhu. Haasawa Obboo Leencoo Baatii kan asiin duraa sobaa bahe baruuf www.bilisummaa.com dhaqi
Previous Sirni Awwaalchaa J/ Obsee Kabajaa Olaanaan Raawwate
Next Norway: Bergen streets in the fight against torture
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk albaati wayi!! akka harree halaakuu malee hojiin ati hojjette qabatamaatti takka hin jiru. ” Ija fuuteen manni karaa dura” jedha Oromoon
‘Nuti Mormaa Oliin ODF, Mormaa Gadiin Immoo ABO dha’ Jechi Kun itti fufiinsa Miseensooti ODF qabsoo ABO﻿ keessatti eegalan galmaan gahuuf Ijaaraman Mullisa, Mataan nagaya qaamaatiif yaada.>> That Means ODF is Responsible Kaayoo ABOn qaama Qabsoo Oromoo ta,e ijaarameef Ija, gurraaf afaan ta,uun tiksuun dirqama ODF ufirratti fudhate fi yaada gaarii warrii ODF ABOf qaban kana heeddu dinqisifadha.
J/Leencoo galatoomi. Waan hedduu firii qabdu nuuf ibsite. Daandii irra jirtan kanatti jabaadha.
‘Nuti Mormaa Oliin ODF, Mormaa Gadiin Immoo ABO dha’ Jechi Kun itti fufiinsa Miseensooti ODF qabsoo ABO keessatti eegalan galmaan gahuuf Ijaaraman Mullisa, Mataan nagaya qaamaatiif yaada.>> That Means ODF is Responsible Kaayoo ABOn qaama Qabsoo Oromoo ta,e ijaarameef Ija, gurraaf afaan ta,uun tiksuun dirqama ODF ufirratti fudhate fi yaada gaarii warrii ODF ABOf qaban kana heeddu dinqisifadha.
Mormaa ol jettee,marmaa gadis je’i uummanni Oromoo isin dhagahuuf hin jiru. gantuun gantuma.
Mormaa gadi si haa awwaalu.AMMA ammo maal jechuu feete? at yeroo hunddaa gala gaaggaltee jedhi ammo waa as baasi.
Deemsi keessan akka isin hin baasne shakkitanii mormaa gadi ABOdha ofiin jechuu eegaltanii?AH, Leencoo Lataafan gadde warra kaaniif kun haarawaa miti waan ta’eef.
mee as baasaa waan jechuu feetan kana.
Qaamni ODF irratti suuqame ABO dha jette. Jecha ajaa’ibaati. Beekaana akkanatti dubbii namaa galcha. Doofana caldhisee nama arrabsaa oola. ODF itti fufa qabsoo ABO waan ta’eef, jechi Obbo Leencoo Baati kun sirriidha. Qabsoon bilisummaa Oromoo sganta ODFtin fiixa ni baati!! Shakkiin tokkolee hinjiru!!
Obbo Leencoo Baati maaf ara of keesa tufa? walaallaa Beekaa of fakkesu!!
Nama soobee Curriculum vitae (CV) isatti galfateetu jiraa laata?
Respect yours audience.
Lamma nasuufani jette jaartiin
Leave a Reply to Humneessaa Oromoo Cancel reply